Foshan SitZone Ifenisha Co., Ltd. Yasungulwa ngo 2009, kuyinto nomkhiqizi ifenisha onguchwepheshe ehhovisi nezihlalo SOFAS.
Inkampani busekelwe China ifenisha nezinto ezibonakalayo edolobheni ukhiye --- Longjiang, Shunde, By abasebenzisa izinto zokusetshenziswa wendawo kanye nokuphathwa kwabasebenzi, inzuzo, inkampani yethu igxile kwesitulo ehhovisi esiyihambayo kakhulu yafezwa. Ngenxa professional umoya abalwela ukungawenzi amaphutha nabahle ikhasimende-okubaluleke kunakho konke ukuthi inkonzo sengqondo, sesisungule idumela elihle Zokukhangisa Embonini efanayo, futhi ube nesikhathi ongeke inzuzo yokuncintisana asobala intengo umkhiqizo ukusebenza ratio.
Njengoba inkampani yasungulwa, Sitzone likhula ngokushesha kungaba isici umthamo ukukhiqizwa noma amathalente. Ngaphansi kwesisekelo ngokuqinile ukulawula izinga. Sinikeza amakhasimende ethu ephelele emva inkonzo ukudayiswa. Ngesikhathi esifanayo, sizoqhubeka ukuthuthukisa design ensimini, ukuletha lokusungula fresh nangamandla ukuze imikhiqizo yethu.
SitZone Ifenisha uzoqhubeka zithobele umqondo ukuphathwa yokugcina ziqhubekele phambili, inkonzo ngokwethembeka, ngakho njengoba ukusevisa wethu ikhasimende ngalinye futhi partner.We wokubambisana ukwamukela abangane ekhaya nasemhlabeni wonke ukuvakashela futhi nixoxe nge us.We ngabomvu kokusungula esikhathini eside mutual nokubambisana nenzuzo futhi baqotho ujabule nawe!